सदिक्षा अमेरिका पुग्न साथ फोटो सार्बजनिक गर्दै भनिन , मैले हारेको छैन अ’पराधि उम्किन पाउने छैन सबैको सहयोग को अपेक्षा गरेकी छु ! – Khabar Patrika Np
सदिक्षा अमेरिका पुग्न साथ फोटो सार्बजनिक गर्दै भनिन , मैले हारेको छैन अ’पराधि उम्किन पाउने छैन सबैको सहयोग को अपेक्षा गरेकी छु !
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०१, २०७८ समय: ०:०६:०८
यो कहिलै पनि लुक्दैन” एकदमै स’त्य रहेछ । त्यो दिन सायद म माथी इश्वरको कृपा बर्सेको थियो र सायद पा’प पनि धुरी बाट कराउने बेला भएको थियो ।
दुइटै हुनुको सं’योगमा एक माध्यम भएर बसेकी म, “खै मेरो दाइको फोटो हेरुम” भन्ने माग बाट सुरु भएको यो न्या’यको माग आज स’म्मा’नित अ’दा’लतको नजर सम्म पुगेको छ । मेरो एक्लो आवाजलाई हजुरहरु सबै न्याय प्रेमीको आवाज र हौसलाले रक्षा नगरेको भए ।
सायद त्यो आवाज पनि बतास सङै बिलाएर जाने थियो होला । तर तपाइहरुले मेरो पि’डा’लाई आफ्नै सम्झि दिन रात नभनी यो बिषयलाई नियालि रहनु भयो । मैले जतिनै धन्यबाद भनेपनि त्यो अ’पूरो नै हुन्छ तर पनि मेरो हृ’दय बाट नै निस्किएको यो ‘धन्यबाद’ शब्दलाई स्विका’रिदिनु हुन बिनम्र अनुरोध यै स्ट्या’टस बाट नै गरें ।
यो बिषयलाई एउटा कानूनी बाटो बाट अगाडि बड्ने मोडमा पु’र्याएर, म आज मैले देखेको उडान भर्ने सपनालाई साकार पार्न र आफ्नो अध्यनलाई पुरा गर्न भनेर U.S.A तर्फ उड्दैछु । हजुरहरुको सुभकामना हमेशा रहने छ ।
भनेर पनि विस्वस्त छु । पढाई सकेर आफ्नो शिक्षाको सदुपयोग गर्न र हाम्रो देशलाई मेरो सम्बन्धित शिक्षाले सेवा दिन चाडै फर्केर आउने छु । हजुरहरुको साथ र सहयोग हमेसा स्म’रणमा रहने छ। साढे दुई वर्षदेखि अमेरिकामा थिइन्– दुर्गा बास्तोला (सदीक्षा)। पा’इलटको तालिम लिन ।
अमेरिका जानुअघि दुर्गा नेपालमै ‘एयर होस्टेस’ को काम गर्थिन्। पहिले सौर्य एरलाइन्सको ‘एयर होस्टेस’ भएर काम गरिन्। त्यसपछि श्री एयरलाइन्सको प्रमुख एयरहोस्टेस जि’म्मेवारी निभाइन्। त्यसपछि उनलाई पाइलट बन्ने जो’श जाग्यो। अनि अमेरिका हानिइन्– पा’इलट तालिम गर्न।
अमेरिकाको टक्सासस्थित ‘डेल्टा क्वा’लिफ्लाइट एभिएसन एकेडेमी’ मा तालिम चलिरहेको थियो। गतको पुस ५ गते उनको फोनको घण्टी बज्यो। फोन घरबाट आएको थियो। खबर पाइन्– दाजु प्रवीणको र’हस्यमय मृ` त्यु भएको। दाजुको नि` धन खबरले उनको हो’शह’वास उड्यो। तत्काल नेपाल आउने नि धो गरिन् ।
रातारात टिकट मिलाइन्। मृ` त्युको खबर सुनेको तेस्रो दिन नेपाल आइपुगिन्। दुर्गाले बिएल नेपाली सेवासँग भनिन्, ‘दाइ न’रहेको खबर सुन्दा मेरो हो’श उड्यो। म कसरी नेपाल पुगेँ, पत्तै पाइनँ।’
नेपाल आएर उनले दाजुको ह.’त्याको अनुसन्धानको मा’ग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय, उर्लाबारीमा बाबुको नामबाट शं’कास्पद व्यक्तिको नाममा किटानी जाहेरी दर्ता गराइन्। दाजुको मृ` त्युले स्त’ब्ध दुर्गालाई इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उ’द्धव पोखरेलले आश्वासन दिए– अनुसन्धान चु’स्त हुन्छ ।
, ह.’त्या हो कि भवितव्य हो न्यायोचित ढंगले यथार्थ पत्ता लाग्छ। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलको कुराले दुर्गा ढुक्क भइन्। दुर्गाले भनिन्, ‘इन्स्पेक्टरले पछि सोधखोज गर्दा त आलटाल गरेजस्तो लाग्यो। घ’ट’नाको मुद्दा के हुँदैछ ।
भनेर सोध्दा पनि उल्टै रिसाउने, झ’पार्ने गर्न थाले।’ दुर्गालाई शङ्का लाग्यो– प्रहरीले केही गड्बड गरेको छ। अनि उनले प्रहरी अ’नुसन्धानको चा’सो लिन थालिन्। प्रहरीले सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेस ।
गरेका कागजपत्र पल्टाएर हेरिन्। सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेस गरेको फाइलमा पो’ष्टमा’र्टम रि’पोर्ट पेस गरिएको थियो। त्यसमा लेखिएको देखिन्– ‘सामान्य मृत्यु’। त्यति मात्र हैन, उनले फाइलमा आफ्नो दाजुको नाममा अर्कै मान्छेको फोटो राखेको समेत फेला पारिन्।
घ’ट’नाबारे सबै कुरा जानकारी हुँदाहुँदै प्रहरी नि’रीक्षकले गलत मनसायले फोटो परिवर्तन गरेको भन्ने उनलाई लाग्यो। उनले घ`ट’नालाई झनै चनाखो भएर हेरिन्। उनलाई लाग्यो– रहस्यमय मृ’ त्युलाई प्रहरीले नै सामान्य बनाएको र दाजुका ह`त्या’रालाई प्रहरीले उम्का’उन खोज्दै छ ।
त्यसपछि दुर्गा प्रहरी कार्यालयबाटै ‘फेसबुक’ मार्फत् घ`टनाको प’र्दा’फास गर्ने भन्दै ‘लाइभ’ गरिन्। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलको कठालो समाइन्। प्रहरीले उनलाई प्रहरी कार्यालय बाहिर निकाल्न खोज्यो। गाँउलेहरुले पनि दुर्गालाई साथ दिए, प्रहरी कार्यालय घे’राउ गरेका थिए।
प्रहरीले आर्थिक ला’भ लिएर घ`टना मिलाउन खोजेको र अ.’पराधीलाई भगाएको भन्दै अहिले गाँउलेले दिनहुँ प्रहरी कार्यालयमा आन्दोलन गर्ने गरेका थिए ।
दुर्गाको फेसबुक लाइभले दबाब अभियान आ’न्दोलनमा परिणत भएको थियो । उनलाई स्थानीयबासीले साथ दिएका थिए । उनलाई सं’सारभरिबाट साथ मिलेको थियो ।
सबैले साहसी महिलाको संज्ञा दिन थालेका छन् । प्र’वीण बास्तोला गत पुष ५ गते शं’कास्पद अवस्थामा मृ` त भेटिएका थिए। उनी राती साथीहरुसँग बसेको कोठामा बिहान मृ’ त फे’ला परेका थिए ।